Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Switzerland njem ozi » Dị ka ókè-ala-emeghe, Zurich Tourism na-eme nkwado dị mkpa
Ihe omumu site na tupu na oge oria COVID-19 emeela ka odi ngwa ngwa maka njem nleta ka odi
Zürich bidoro na ntukwasi obi na nkwado nkwado maka ọdịnihu
Zürich Tourism na-ekwusi ike na ntinye aka na mmepe mmepe
Zürich Tourism na-aga n'ihu na-eme ka a mata banyere mmepe gburugburu ebe obibi
Dika uwa n’ebido imepe oke ala ya na njem nlegharị anya, ihe omumu site na tupu na oge oria COVID-19 egosiputala ogha n’iru iji mee njem nlere. Iji mezuo nke ahụ, obodo Zurich, tinyere Switzerland n'ozuzu ya, amalitela nkwuwa okwu na-adịgide adịgide na nke gụnyere maka ọdịnihu.
Njem Nleta Zürich na-ekwusi ike na mmepe siri ike ma na-eduzi site na ihe atụ kemgbe 1998. Nzukọ ahụ gosipụtara otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na 2010, mgbe ọ nọ n'etiti ndị mbụ bịanyere aka na Switzerland Tourism's Sustainability Charter, na na 2015, Zürich Tourism weghachiri nkwa a site na mmepe nke Echiche Nkwado Sustainability 2015 + zuru oke, nke setịpụrụ ebumnuche ịtụkwasị obi na nke ọdịnihu Site n'ịnọgide na-eme ka ndị mmadụ mata banyere mmepe nke eco, Zürich Tourism na-ekpuchi ụzọ atọ nke nkwado: gburugburu ebe obibi, akụ na ụba na ọha mmadụ. Zurich Tourism anabatakwala obodo na canton, emeela ka usoro niile dị na Zurich na mpaghara gbara ya gburugburu dị ka ụkpụrụ mba ụwa maka Smart Destination. Na obi Zurich iji kwado ya bu:
Ma ndi obia obula na acho 100% organic, ihe ndi ozo na ndi ozo, ma obu ihe ndi ozo, o di mfe ichota ihe oriri na ugha na Zurich. Imirikiti ụlọ nri dị n'obodo ahụ na-etinye mmalite dị mkpa na mmalite oge nke ihe ha na-eji, na ọtụtụ ndị isi nri na-azụta ihe ha na-eme site na otu n'ime ahịa Zurich ọtụtụ izu.
Na mgbakwunye, Zurich bụ ebe dị mpako nke ụlọ nri anaghị eri anụ nke ụwa, nke ndị ezinụlọ Hiltl nwere, ndị ụlọ oriri na ọ restaurantsụ haveụ ha etinyela kpamkpam na nri ndị anaghị eri anụ kemgbe 1898. Ndị anaghị eri anụ na ụlọ nri anaghị eri anụ ụfọdụ bụ ndị ama ama na Zurich.
Ka ndị njem na-alaghachi azụ ụwa post-COVID, a ga-adọta ha n'ebe ndị mmadụ na-erughi, oghere sara mbara. Ọ bụ ezie na Zurich bụ nnukwu obodo, ọ nwere oke mma ya na ebe a na-eti ihe ma ọ bụghị mgbe niile ka ọdịbendị na-emeghe. Ndị na-eme njem n'obodo agaghị enwe mmechuihu site n'ọtụtụ oghere zoro ezo n'ime obi obodo ahụ, site na ogige ndị a magburu onwe ya na ụlọ ọrụ ọha na eze mara mma.
Ọ bụ ezie na ndị obodo maara ha nke ọma, ọtụtụ ndị njem anaghị ama ebe ndị a magburu onwe ha dị, na-eme njem nleta na Zurich niile pụrụ iche na ihe ndị a na-atụghị anya ya. Offọdụ n'ime ebe ndị a abụghị kpọmkwem n'ụzọ ndị njem ma ọ bụ nwee oge mmeghe pụrụ iche. Mana ha kwesiri ịchọọ, na-akwụghachi ndị na-enyocha obodo ụjọ na-akwụ ụgwọ maka nlegharị anya mara mma na echiche dị ukwuu.
Storelọ ahịa na-akwado:
Ndị njem na-ahụ maka gburugburu ebe obibi nwekwara ike ịchọta ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ahịa dị iche iche na nke a na-emepụta nke ọma, yana ọtụtụ ụlọ ahịa na-efu efu. Dika ochicho nke uwe eji eme ihe banyere gburugburu ebe obibi na-agbasawanye, ndi na-eseputa ihe na-achoputa na ejiji ha n'uzo na adighi nma, na-eji akwa eji emegharia, na-ebelata akara ukwu carbon ha ma na-elebara ndi oru anya. Ndị na-azụ ihe metụtara gburugburu ebe obibi nwere ike ịchọta ọtụtụ ụlọ ahịa na-efu efu - azụmaahịa a raara nye Mbelata nri mkpofu na ụlọ ahịa nke ejirila nkwakọ ngwaahịa mmadụ mezue.
Ọrụ na Oge ezumike:
Dika ndi oru n’uwa n’uwa na agbanwe site na ime ime oru rute n’ime ulo oru, ndi oru n’ebido n’ebido imeghari uche maka ndu ndu ohuru. Na Zurich, azụmaahịa na oge ezumike nwere ike jikọta n'ụzọ dị ịtụnanya na oghere na-arụkọ ọrụ ọnụ, kọfị na ụlọ nri. N'ime ụlọ nzukọ mmepụta ihe n'oge gara aga, na ụlọ ahịa akwụkwọ, ma ọ bụ n'okpuru ụzọ ụgbọ okporo ígwè: ndị nomads dijitalụ Zurich na-ezute ndị ntorobịa ọhụụ ọhụụ na mbido mmalite, ma na-atụgharị echiche ọhụrụ na oghere ndị na-arụ ọrụ n'obodo na ụlọ oriri na ọéụ cafụ.
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, Zurich nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ metụtara gburugburu ebe obibi na-aga n'ihu, gụnyere ụlọ ndị na-arụ ọrụ ike, usoro ihe mkpofu nri maka ụlọ ọrụ ile ọbịa na mmemme e-bike obodo. Site na njem gaa na akụrụngwa na nchekwa mmiri, Zurich nọ na njedebe nke teknụzụ na-adigide na-ele anya maka ọdịmma gburugburu ebe obibi na ahụike ka mma.